Ihowuliseyili ngerabha Grommet Ukwenziwa kunye Factory | Sanda
Zintoni iiGrommets? grommets zerabha mveliso
IiGrommets ziluncedo ekusetyenzisweni kwe-elektroniki xa ucingo okanye ityhubhu kufuneka idlule kwisinyithi okanye kwenye into enokubangela umonakalo. Ngokuqhelekileyo, zikhusela iintambo kwiimbombo ezibukhali kunye nemiphetho.
I-Sanda Rubber ivelisa uluhlu olubanzi lwee-grommets ezikumgangatho ophezulu zerabha ukuze zilingane uninzi lwezicelo zorhwebo. Sigcina uluhlu olubanzi lobungakanani obahlukeneyo kunye nezixhobo ukufezekisa iimfuno zakho ezithile. Izitayile ezininzi ziyafumaneka kwizinto ezingaphezu kwesinye okanye ubunzima be-durometer.
Sivelisa kunye ne-Mil-Spec grommets yerabha yokusetyenziswa komkhosi, ifuthe lokunyuka kweerabha ukukhusela iinxalenye kwingxolo kunye nokushukuma, kunye nezinye iigrommets ezikhethekileyo. Sisebenzisa izixhobo zethu zerabha yangaphakathi yerabha eyenziweyo, iigrommets zinokunyanzelwa endaweni.
Izicelo zomzekelo zibandakanya
1. Ucingo oludlula kwiigrommets
2. Ukungcangcazela ukungcola / iiNdibano zeNtaba
3. Ukutywina iigromets zerabha
4. Ukugqiba izinto
5. Iigromethi zerabha zokuvala
6. Spacer iirubber grometsUkongeza kwizicelo ze-elektroniki, iigrommets zethu zinokusetyenziswa kumashishini ahlukeneyo kubandakanya i-aerospace, ukhathalelo lwempilo, ulwakhiwo, ukuthuthwa, kunye nezicelo zokhuselo. Sikhonza i-OEM kunye nenxalenye yentengiso, sigcina uluhlu lwabasasazi bemizi-mveliso. Sizenzele igama kwimveliso esemgangathweni ophezulu ..
1. Kungcono ukuba usithumelele umzobo wakho kuqala, njengoko uninzi lweemveliso zethu zilungiselelwe wena
2. Nceda wazise ngendawo osebenzela kuyo kunye nezinye iimfuno zakho (umz. Ubukhulu, imathiriyeli, ubunzima, umbala, ukunyamezelana, njl. Njl.) Ukucaphula amaxabiso afanelekileyo.
Egqithileyo Irabha Mount
Okulandelayo: Irabha Gasket
Iplagi yeRubber Grommet